गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको प्रवक्तामा गुरुङ
सिड्नी । अन्ततः लामो समयपछि गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले रिक्त प्रवक्ता र पब्लिक अफिसरमा पदपूर्ति गरेको छ । शनिबार बसेको बोर्ड अफ डाईरेक्टर्सको बैठकले प्रवक्ता पदमा नन्द गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । गुरुङ यसअघिका एनआरएन अष्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष हुन् भने गएको निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासी थिए ।
यसैगरी बैठकले पब्लिक अफिसरमा कोमल पाठकलाई नियुक्त गरेको छ । पाठक यसअघि नेप्लीज अष्ट्रेलियन युथ एशोसिएसन नयाका संस्थापक अध्यक्ष थिए । मनोनित भएपनि यी दुवै पद बोर्ड अफ डाईरेक्टर अन्तर्गतका नै शक्तिशाली पद हुन् ।
एनआरएन अष्ट्रेलिया यहाँको संघीय कानून अन्तर्गत दर्ता गरिएपछि १५ सदस्यीय बोर्ड अफ डाईरेक्टर्सले नै सबै निर्णय गर्दै आएका छन् । अब यी दुई व्यक्ति थपिएपछि यो संख्या १७ पुगेको छ । यससँगै बैठकले पूर्णनाथ घिमिरे सिड्नी, रदिप थापा क्वीन्सल्याण्ड र प्रजिता गेलाल साउथ अष्ट्रेलियालाई एनसीसी सदस्य पदमा समेत नियुक्त गरेको छ । यससँगै विभिन्न २५ जनालाई एनआरएन अष्ट्रेलियाको सल्लाहकार बनाइएको छ ।
एनआरएन अष्ट्रेलियाका महासचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीका अनुसार २५ जनाको सल्लाहकार टिम यस्तो छ –
दिनेश पोखरेल, दिनेशराज जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, नवीन वाग्ले, प्रविन गुरागाईं, श्री पन्त, नईन्द्र श्रेष्ठ, दुर्गादत्त कँडेल, अनील श्रेष्ठ, डा. कृष्ण श्रेष्ठ, सिर्जना संग्रौला, केशव सापकोटा, सीके भुसाल, हेमन्त काफ्ले, बामदेव पौडेल, विवेक थापा, सुनील भण्डारी, त्रिलोचन पोखरेल, विनित शर्मा, गणेश तामांग, सूर्य आचार्य, दिपनारायण चौधरी, सुजित सिग्देल, बालचन्द्र भट्टराई, हिमलाल गैरे सल्लाहकार बनेका छन् ।
‘स्थानीय सरकार छ, भोकै मर्न दिँदैनौँ’
काठमाडौँ । कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न सरकारले लकडाउन गरेपछि ज्याला मजदूरी गरेर गुजारा गर्ने विपन्न परिवारलाई तनहुँका स्थानीय सरकारले खाद्यान्न सहयोग गर्न शुरु गरेका छन् । लकडाउनका कारण काम ठप्प भएपछि ह
काठमाडौँ । एनआरएनए कोरियाले कोरोना परीक्षण गर्ने दुई हजार किट्समा अरु दुई हजार थपेर चार हजार किट्ससहित अन्य स्वास्थ्य सामग्री पठाउने निर्णय गरेको छ ।